နားခိုရာ: Online MBA (Myanmar)
Posted by little moon at 6:16 PM
I have heardajoke about that department.
"Men (here it means men or women) from the management department (Padamya) do not know how to manage (though their business is teaching Management)."
I doubt on feasibility of that program. How does it rely on unreliable Myanma internet?
I very appreciate the quality of the MBA from Myanmar. I got executive MBA from Myanmar and got the MBA ( Marketing) from Japan.The real differences between them are focused area. Although Myanmar MBA have some difficulties in MNCs,They are the best suited for Myanmar economic environment.
ဒီထက်ပိုတဲ့ ကွာခြားချက်ကဘာလဲလို့ ရေးထားစေချင်
တယ်. နောက်တစ်ခုက ဂျပန် အမ်ဘီအေ နဲ့ မြန်မာ အမ်ဘီ ကွာတာဘာလဲ...............
ထင်တာကတော့ ........... အနောက်နဲ့ ပိုကွာမယ်ထင်တယ်
စင်္ကာပူ က အမ်ဘီနဲ့ တောင် အတော်ကောင်းတာ ဆိုတော့
အထူးသဖြင့် ဆရာများရဲ့training မတူတာဘဲ ထင်တယ်
under-gra တောင်မတူတာတွေ ရှိတယ်
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လိုအပ်ချက် ကွက်လပ်ကိုတော့ ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်
MBA full time တက်ချင်လို သိထားတာလေးများ ရှိရင် လမ်းညွန်ပေးစေချင်ပါတယ် ။ thanks ....
အမ်ဘီအေသင်တန်းများကို နှစ်စဉ်ဘယ်အချိန်မှာ သင်ခွင့်ဖြေရပါသလဲ သိချင်ပါသည်။ ကျေးဇူး။
MBA FULL TIME တွေက ဘယ်ချိန်ဖွင့်လဲမသိဘူး ၀င်ခွင့်သင်တန်းတက်မယ်ဆို၇င်ဘယသင်တနးးကောင်းလဲမသိဘူ၇ှင့်တက်ချင်လို့ပါ
ညနေပိုင်းMBAသင်တန်းကိုတနှစ်တစ်ခါ ခေါ်ပါသလား သိချင်ပါတယ် ရှင့် ။
Full time MBA ၀င်ခွင့်အတွက် ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ် ပါသလဲ။ တက်ချင်လို့ပါ။
Also visit my web-site ... investors buying homes PA
Here is my blog - vidacup review
Also visit my weblog Business Plan Product
My web blog kawat stitch
needed. I most no doubt will make certain to don?t omit this site and give italook onaconstant basis.
My webpage - eco.kid
My homepage ... FDA approved diet and appetite suppressors in Miami
Also visit my web-site - wii u news
Also visit my web blog: exercise weights
Also visit my page :: Free XXX Videos
Feel free to visit my web page :: webcam sex videos
Here is my weblog ... look at hot pussy tubes sex clip (pop.freecoretube.com)
electronic cigarette brands, smokeless cigarette, electronic cigarette, electronic cigarette, best electronic cigarette, best electronic cigarettes
DMA Course အကြောင်းလေးပါပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပေးပါလားခင်ဗျာ
၀င်ခွင့် သင်တန်းချိန်နဲ့ ကုန်ကျစရိတ် တွေအကြောင်းပြောပြပေးနိုင်ရင် အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.